डिसेम्बर बर्थस्टोन टान्जनाइट, फ़िरोज़ा - नयाँ अपडेट २०२१
Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन डिसेम्बरका लागि ढु the्गा हुन् जुन दुबै डेक्स बर्थस्टोनको पुरातन र आधुनिक सूचीहरूको आधारमा छ। डिसेम्बर बर्थस्टोन रिंग वा नेकलेस गहनाका लागि उत्तम रत्न। निलो टाउकोज कहिलेकाँही डिसेम्बर बर्थस्टोन निलो रंग पनि हुन्छ।
डिसेम्बर बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एउटा जन्मस्टोन मणि हो जुन डिसेम्बरको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन। डिसेम्बर आधुनिक बर्थस्टोनको घण्टी वा हारको लागि उत्तम रत्न
डिसेम्बरको बर्थस्टोन रंग के हो?
डिसेम्बर ढु stone्गा कहाँ पाइन्छ?
डिसेम्बर बर्थस्टोन गहना के हो?
डिसेम्बर बर्थस्टोन कहाँ पाउन सकिन्छ?
डिसेम्बर जन्मस्टोनका राशिफलहरू के हुन्?
राम्रो भाग्य डिसेम्बर मा शुरू हुन्छ
खनिज zoisite को निलो र बैजनी रंग विविधता हो Tanzanite एपिडेट खनिज समूहसँग सम्बन्धित छ। यो मात्र फेला पर्‍यो तान्जानिया, एक धेरै सानो खनन क्षेत्र मा।
फिरोजा एक अपारदर्शी, नीलो देखि हरियो खनिज हो जुन तामा र एल्युमिनियमको हाइड्रेटेड फास्फेट हो। यो उत्तम श्रेणीहरूमा दुर्लभ र मूल्यवान छ र यसको अनौंठो रंगको कारण हजारौं बर्षदेखि यसलाई एउटा रत्न र सजावटी ढु stone्गाको रूपमा दिइन्छ।
एक प्रेम आकर्षण को रूप मा सम्मानित। यो राम्रो भाग्य र सफलताको प्रतीक हो र दिमागलाई आराम दिईन्छ र यसको धारकलाई हानिबाट बचाउँछ। फ़िरोज़ा रिंगहरू, विशेष गरी, दुष्ट आत्मालाई टाढा राखीन्छ।
Zircon nesosilicates को समूह सम्बन्धित खनिज हो। यसको रासायनिक नाम zirconium सिलिकेट हो। सिलिकेटमा जिक्रोन फारमहरू उच्च क्षेत्र शक्ति असंगत तत्वहरूको ठूलो अनुपातको साथ पिघलिन्छ।
Tanzanite यसको उल्लेखनीय कडा ट्राइक्रोइज्मको लागि प्रख्यात छ, क्रिस्टल झुकावमा निर्भर वैकल्पिक रूपमा निलो, बैंगनी र बरगंडी देखिन्छ। Tanzanite विभिन्न प्रकाश अवस्थाहरू अन्तर्गत हेरिए पनि फरक तरिकाले देखा पर्न सक्छ।
फिरोजा, डिसेम्बर बर्थस्टोन नीलो र whiteहरू सेतादेखि पाउडर नीलोदेखि आकाश नीलो रंगसम्म, र नीलो हरियोदेखि एउटा पहेंलो हरियोसम्म। निलो इडिओक्रोमेटिक तांबेको विशेषता हो जबकि हरियो या त फलामको अशुद्धताको परिणाम हुन सक्छ।
Zircon धेरै र colorsहरूमा देखा पर्दछ, रातो खैरो, पहेंलो, हरियो, निलो, खैरो र बेरंग सहित। Zircons को रंग कहिलेकाँही गर्मी उपचार द्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। केवल निलो जिक्रोन डिसे बर्थस्टोन हो। हल्का नीलो र color सबै भन्दा साधारण, गाढा निलो अत्यन्त कम विरलै हुन्छ।
केवल ज्ञात tanzanite वाणिज्य महत्व को निक्षेप उत्तरी तन्जानिया मा अवस्थित छ।
मुख्य स्रोतहरू फिरोजा ईरान र संयुक्त राज्य अमेरिका हो। अन्य स्रोतहरू हुन् चीन, बुल्गारिया, तिब्बत, अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, भारत, चिली र तुर्कस्तान।
निलो जिकर्न कम्बोडियाबाट आउँदछ।
आधुनिक बर्थस्टोन गहना यसका साथ बनेको छ tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन। नीलो रंगका पत्थरहरू साना सेता हीरा वा रंगहीन रत्नहरूको साथ पूर्ण रूपमा मिल्दछन्। हामी डिसेम्बर बर्थस्टोन र color्ग रिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, झुम्का, हारहरू र अधिक बेच्दछौं।
त्यहाँ राम्रो छ tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन हाम्रो पसलमा बिक्रीको लागि।
Tanzaniteसबैभन्दा गहिरो छायाँ, इंडिगो, निलो रंगको किरणको विश्वासको साथ वायोलेट किरणको अन्तर्ज्ञानको संयोजन गर्दछ। यसले बुद्धि, सत्य, मर्यादा र आध्यात्मिक निपुणता ल्याउँछ। न्याय र लामो जीवनको ढु stone्गा, यसले आत्मपरीक्षणलाई बढावा दिन्छ र राम्रोसँग प्रयोग गर्दा गहिरो बुद्धिको परिणाम हुन्छ।
फिरोजा, डेक बर्थस्टोन, लामो समयदेखि प्राचीन संस्कृतिहरूमा धन र सम्पन्नताको प्रतीक हो, तर यस उल्लेखनीय रत्नको मोह आजको भन्दा कता कहिलो हुन सकेको छैन। जे भए पनि यो कहाँ पाइन्छ, फिरोजा शुद्ध, निको पार्ने जस्ता शक्तिशाली, सकारात्मक गुणहरूसँग सँधै सम्बन्धित छ।
निलो जिकर्नलाई कालो उर्जा शुद्ध गर्न भनिन्छ। यो यात्राको लागि वा प्राचीन समयमा दुष्टबाट सुरक्षाको लागि ताईजको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। जब तपाईं नकारात्मक ऊर्जामा फसेको महसुस गर्नुहुन्छ, निलो जिक्रोन तपाईंको ऊर्जा सफा गर्न भनिन्छ। यसले तपाईलाई समृद्धि र सम्मान पनि दिन्छ।
धनु र मकर पत्थर दुबै डिसेम्बर ढु stone्गा हुन्।
जे होस् तपाई धनु र मकर हुनुहुन्छ। Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन डिसेम्बर १ देखि 1१ सम्मको ढु stone्गा हुन्।
चिनियाँ राशि: राम्रो भाग्य डिसेम्बरमा शुरू हुन्छ, पैसा भित्र घुम्दैछ।
बाघसँग सम्बन्धितहरूका लागि, डिसेम्बरमा, भाग्य, ठूलो भाग्य र सानो भाग्य एक साथ आउनेछन्। जब ठूलो भाग्य फर्कन्छ, धन बाहिर रोल हुनेछ, र जीवन सपना जस्तो हुनेछ
डिसेम्बर 1 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर2धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर3धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर4धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर5धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर6धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर7धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 8 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर9धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 10 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 11 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 12 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 13 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 14 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 15 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 16 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 17 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 18 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 19 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 20 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 21 धनु Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 22 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 23 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 24 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 25 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 26 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 27 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 28 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 29 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 30 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
डिसेम्बर 31 मकर Tanzanite, फिरोजा र जिक्रोन
प्राकृतिक डिसेम्बर बर्थस्टोन हाम्रो मणि पसलमा बिक्रीको लागि